चुनावको मुखैमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले बाँड्दैछ ८ अर्ब ७१ करोड !
ARCHIVE, NEWSPAPER » चुनावको मुखैमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले बाँड्दैछ ८ अर्ब ७१ करोड !
चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो । शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुन:स्थापना एकाइले बुधबार ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम निकासाका लागि अख्तियारी दिएको हो । आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।